घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण को बारे मा प्रश्न - भाग I - कम्पनी समाचार - शेन्ज़ेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
गृह आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको बारेमा प्रश्नहरू （भाग I use
समय: 2019-11-20 हिट्स: 4
हामीले केहि वर्ष अगाडि होम आईपीएल प्रयोग गर्‍यौं, तर प्राय जसो व्यक्तिहरू त्यस समयमा यसको मतलब गर्दैनन्, र हामी सुरू गर्ने चरण पनि थियौं। जबकि विगत दुई बर्षमा, घर सौन्दर्य उपकरणको प्रविधि अधिक र अधिक परिपक्व भएको छ, त्यसैले अधिक र अधिक मानिसहरू यसमा रुचि राख्छन्। एक पटक हामीले वेचातमा क्षण राख्यौं, त्यहाँ धेरै साथीहरू यसका बारे सोध्न आएका छन्।
पक्कै पनि हामीले आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्दा केहि मुद्दाहरूको लागि ध्यान दिनै पर्छ। त्यसोभए आज हामी तपाईंलाई ती प्रश्नहरू देखाउँनेछौं जुन तपाईंले धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ।
आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण सिधा प्रयोग गर्ने वा शरीर कपाल कपाल पछि यो प्रयोग?
सर्वप्रथम, आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको कार्य सिद्धान्त यो हो कि कपाल र कपालका फुलहरू मेलानिनको धनी हुन्छन् र फोटोनले मेलानिनलाई लक्षित गर्न सक्दछ र यसमा सही रूपमा काम गर्न सक्दछ, त्यसपछि मेलानिन फोटोनको अवशोषण पछि तातोमा परिणत हुन्छ, र कपालको फोलिकल्स एपिडर्मिसलाई क्षति नगरेसम्म सुरु गरिन्छ, नष्ट नभएसम्म, यसरी कपाल हटाउने उद्देश्य प्राप्त गर्दै। त्यसैले कुनै फरक पर्दैन उपकरणको सीधा वा कपाल कपाल पछि, वास्तवमा यसको प्रभावमा फरक छैन।
दोस्रो, यो उपभोगको उपभोक्ताहरूमा निर्भर गर्दछ, धेरैलाई केही गन्ध मनपर्दैन, तपाईलाई थाहा छ यदि कपालको कपाल नखोली मेसिन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले केही पेस्ट गन्धहरू हुनै पर्छ, त्यसैले धेरै जसो अस्पताल र सौन्दर्य सैलुनले ग्राहकहरूको शरीरको कपाल काट्छन्। जब आईपीएल कपाल हटाउने मेसिनको प्रयोग गर्नुहोस्, जे होस् यदि केहि ग्राहकहरू घरमै तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैछन् भने तिनीहरूको गन्धले खास फरक पार्दैन।
यो उच्च प्रविधि जस्तो देखिन्छ, तर यसले छालामा केहि साइड-इफेक्टहरू देखाउँदछ?
सबै ऊर्जा-प्रकारको सुन्दरता उपचारमा उनीहरूमा बढी वा कम केही खास जोखिम कारकहरू हुन्छन्। यो समय-समयमा हेर्ने जस्तै हो कि त्यहाँ फोटोन कपाल हटाउने मानिसहरू ब्युटी सैलुनमा जलाउँछन्, अधिकतर किनभने ऊर्खाइ सौंदर्य मेशिनहरू उच्च ऊर्जा र अव्यवसायिक अपरेशनको साथ। जबकि घर को उपयोग आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणहरु को ऊर्जा धेरै कम छ, त्यसैले यो जोखिम को धेरै कम गर्दछ।
यद्यपि उर्जा धेरै कम छ, यद्यपि पेशेवर अझै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। त्यसैले यहाँ हामी शेन्जेन नोबल निर्मातालाई सिफारिस गर्दछौं, आउटपुट लाइट सटीक छ, सुरक्षा उर्जा नियन्त्रण डिजाइन, र विभिन्न सुरक्षा उपायहरू सहित, स्थायी र पीडा रहित कपाल हटाउने।
अघिल्लो: छाला र कपाल हटाउने आधारभूत ज्ञान
अर्को: आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्दा के याद गर्न सकिन्छ